Wonke umntu ufuna ukufunda ii-horoscopes ezifezekileyo, i-horoscope yeveki enye yezona ziwayo zithandwa kakhulu. Abavumbuli beenkwenkwezi, njengababikezeli bemimoya, baninzi benza ii-horoscopes zeveki. Ngoko ke, sinika i-horoscope kwiveki ezayo: ukususela ngo-Epreli 25 ukuya kuMeyi 1, 2011.
Ngokwe-horoscope kwiveki ezayo, i-March Aries kufuneka ijongane nemicimbi yezemali kunye nocwangciso-mali. Ndikholelwe, uya kuba nako ukuqwalasela yonke imiba. Ukusuka ku-Aries, owazalwa phakathi komqondiso, isiqingatha sokuqala seveki kuza kufuna ukuxinwa kunye nokunyamezela. Isimo sengqondo sokungaxolisi emsebenzini asivumelekanga. Kwi-Aries yokuphela komqondiso, ngokuchaseneyo, amathuba okuphumelela aya kunikwa kuze kube ngoLwesine. Emva koko imeko iya kuba yimbi ngakumbi, ngakumbi xa uqala ukubhalela ukuhluleka kwakho kwabanye.
Ngo-Aprili iTaurus iya kuba segxeni ukwenza oko bekude kufuneke ukuba iphuphe. Kwaye unako ukwenza utshintsho nje kuphela, kodwa nakwimeko yakho. Kodwa i-Taurus Meyi icebo yale iveki kufuneka ifutshane. Kutheni kukhwela kwesikhumba ukuba azinakulungele ukuzaliseka? Kwaye kufuneka ukwesaba iziphakamiso ezingathandabuzekiyo. Kungenzeka ukuba oku kungenempembelelo embi kwigama lakho. Kwaye ingenakucingeka ukuba iingcamango zakho ziyakubonwa.
Ukuthatha inxaxheba ekuxazululeni iingxaki zeentsapho kuya kubangela ukucaca kunye nokuqonda ngokuvisisana ubudlelwane be-May Gemini. Kwaye ngokuqwalasela ngokucophelela iziganeko zangoku, uya kuqonda ukuba yeyiphi indlela omele uqhubeke nayo. UGemini, ozalwe ngoJuni, uya kuqhuba ngempumelelo ishishini elidibeneyo. Ekhaya, nazo zonke izinto zifudumele kwaye zizolile, ngokubaluleke kakhulu, zinyameke ngabo baxhomekeke kuwe. Yaye ungakhanyeli uncedo kulabo babala inkxaso yakho. Ndikholelwe, i-horoscope yakho yenhlanhla yeveki iya kuzaliseka.
Le veki iya kufuna amandla amaninzi nokunyamezela kwiCancer. Okungenani, le horoscope yokulumkisa kwiveki ezayo. Uya kufuneka ube nakho ukuhamba ngexesha kwiimeko eziza kutshintsha ngokukhawuleza kweli xesha, kubandakanywa nasemsebenzini. Kodwa kubonakala ngathi, ekugqibeleni, uya kuhlala ulungile. Kwaye kuphela iCanscence ekupheleni kwesibonakaliso kunye nomsebenzi kungabikho kwemingcipheko, kwaye ukuqonda ngokuvisisana kuya kwaphulwa nezihlobo. Ngokukodwa ukuba amacala omabini angakulungele ukwenza izivumelwano.
Le mihla iingonyama aziyi kuba nethuba lokuphumelela kuyo nayiphi na intsimi. Ngoko ungaphuthelwa ithuba! Enkonzweni uya kuthi uzibonakalise njengengcali yeklasi yokuqala. Ubomi bemihla ngemihla uza kuphinda ukhanyise ngokukwazi kwakho ukuqhubeka nabantu kunye nokuxazulula ngokukhawuleza iingxaki zeentsapho ezinzima. Kwaye kaninzi ukuthetha nalabo abanamava obomi obuninzi nolwazi. Ungesabi ukubuza imibuzo onomdla kuyo - iimpendulo ziya kuphelela ngokupheleleyo.
NgoAgasti Dev, iveki, ngokuhambelana ne-horoscope, iya kuvelisa. Ngokukodwa xa ungayichitha ixesha kwizinto ezintle kwaye uya kuba nokufumana uncedo lwabanye abantu kunye neengcebiso. Nika ingqalelo kwizinto ezilandelelanayo-zithwala ulwazi malunga nekamva. Ukubambisana, injongo kunye nokuqonda kwabo bazalwa phakathi kweso sibonakaliso kuya kukuvumela ukuba ulungelelanise imeko kwaye uphumelele kwimpumelelo yakho kwimicimbi yakho yentliziyo. Iilgijimi ekupheleni kwesibonakaliso akuvumelekanga ukuba wonke umntu asebenzise uhlobo lwakho lovelwano ngokulandelelana - ngoku akusiwo wonke umntu uya kuxabisa ukunyamekela kwakho nokupha. Kwaye oko kusoloko kuhlambalaza.
Abavumbuli beenkwenkwezi bayalumkisa iLibra: qaphela zonke iinkathazo zangaphandle kunye nezenzo zakho ezizenzekelayo. Ngeveki elandelayo, uya kuba nomnqweno wokubeka ingozi okanye ukujongana noko ungenako. Hayi, kodwa ngeli xesha iimpembelelo ezinjalo ziza kuzisa kuphela intloko engenakuncedo kunye nexhala. Kwaye nasemsebenzini, nasekhaya, ubudlelwane nabanye buya kuncipha. Ukuze ungangeni kwiingxabano kunye neengxabano, uya kudla ukufumana iindlela zokuxolelana. Indlela engcono kakhulu yokuphuma kukukhusela amaphuzu okuphikisana okanye ukwenza okuthile ngomphefumlo.
Ngeveki ezayo iScorpios iya ku kholelwa kwii-horoscopes ezifezekileyo. Emva kwakho konke, ngokweenkwenkwezi zeenkwenkwezi, iveki yokugqibela ka-Apreli iya kuba yinto engavumelekanga ngokuqhelekileyo kwi-Scorpions. Le mihla, umsebenzi oqhelekileyo uza kuzaliswa ngobuchule kunye nokuphefumlelwa. Isono siya kukhononda malunga neendawo ezizungezile: oonxibelelwano baya kuzuza, uvakalelo olukhulu kunye neqela elipheleleyo leemvakalelo ezilungileyo. Ayinakuyenza ngaphandle kweentando zothando kunye nabaziwayo. Kwaye kuphela kuphela ukuphela kweScorpion yesibonakaliso into okanye umntu ophazamisayo. Kwaye, ngoko ke, amandla kunye neentsholongwane ezongezelelweyo ziya kufuneka ukuba zifezekise.
Leveki ephumeleleyo iya kuzisa kwiSagittarius zesini zesini, unxibelelwano oluninzi, oluhle kunye nefuthe. Uyakwazi ukuvuya ngokuqinisekileyo ukuba ujikelezwe ngabantu ebudlelwaneni obani na ukuqonda okunjalo kunye nemvakalelo efudumalayo yokuba sele ulungele omnye nomnye! Kukho ixesha lomsebenzi wokudala - liya kutshisa ezandleni zakho. Unokufikelela kwiziphumo ezimangalisayo, ufumane ukuzonwabisa ngokwenene emsebenzini.
NgoDisemba i-Capricorns, ixesha elihle kakhulu liza kudibaniswa nempumelelo emsebenzini okanye ngobudlelwane obufudumele nolubungakanani kwimeko yakho. Kodwa iCapricorn Januwari iya kufuneka ijongane nazo zonke iintlobo zeengxaki. Kwaye ungaba nexesha lokujongana nomnye, njengokuba kwindawo yalo ifika entsha. Yaye into eyona nto ayikuyikwesaba! Kungenjalo ukucaphuka kwakho okanye, ngokuchaseneyo, ukungakhathaleli kuya kuba ngamava okanye ilahleko ezongezelelweyo, ngaphandle kokungenakwenzeka ukuba ngaphandle. Ngokufanelekileyo kunye nokuthetha kunye nezihlobo, musa ukugxekwa kunye namazwi aqatha.
Ngokutsho kwe-horoscope ye-Aquarius kunye nomsebenzi, kunye nentsapho, kunye nobudlelwane bomntu, yonke into iza kuphucula ngokusemandleni akho. Yonke indawo okulindeleke ukuba uyiqonde, uthathe inxaxheba, ube ngumhlobo kunye noluhlu olufanayo lweempawu ezifanayo ezihambelana nommandla woqhagamshelwano. Kwaye akuyi kuba nzima ukuguqula nayiphi na imeko. Yaye uya kwenza oko ukuze abanye bangayi kuqiqa. Kodwa, kufuneka sikwenze ngokufanelekileyo, ukuba kuyimfuneko, ngoko uvuma ngokukhawuleza ityala lakho kwaye wenze ukuvuma. Eli xesha liyakulungelelaniswa nemihla yokuthandana.
Umsebenzi, ucoceko kunye nekhono ngomzuzwana omnye ukufumana ulwazi oluyimfuneko luya kwenza i-Pisces le mihla ibonakale kakhulu kwaye ivelise. Ngendlela, bobabini emsebenzini nasemndenini kuya kuba kuhle ukuqala ukutshintsha imibono nokuxoxa ngezicwangciso zekamva. Ungakwazi ukuphazamisa lula ingqondo kunye namaqabane oshishino, kunye nekhaya. Kwaye oku kuya kuba negalelo elihle kumtshato wakho. Kwaye kuphela iMisongo yokuphela komqondiso wokuphuhliswa kweziganeko ezenzekayo inenzuzo kakhulu ukulandela, njengokuba kunjalo, ukusuka ngaphandle. Futhi musa ukuphakamisa imiba yezemali: ngoku ungayicombululi i-vseravno, kodwa unokuxabana.
Kholelwa ii-horoscopes ezizaliseka - ii-horoscopes zeveki, usuku, inyanga. Emva koko, bayalumkisa malunga neengxaki ezinokwenzeka kunye nexesha eliyimpumelelo - ukuze ungaphuthelwa ithuba!
Yithini isifuba esisekho?
I-Horoscope Ukuhambelana noMfazi - umdlavuza
Iimpawu zamatye kunye namatye esimboli seCapricorn
I-Cream-soup eyenziwe kwi-cauliflower
I-ukhilimu omuncu ngaphandle kobisi
I-Cocktail kunye ne-kumquat kunye negromegranate
Usana olutsha: imithetho yokunyamekela
Iingqungquthela ezilungileyo kakhulu zangaphandle
Ukunyamekela ngoncedo ebusika
UOlga Prokofieva: Ndifanele ndigqoke izibuko zelanga
Ulala njani embhedeni nomthandi wakho?